Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 56aad | Jowhar Somali News Leader
Home LOVE STORY Sheekadii Cusbeyd : Libin Jaceyl Qeybtii 56aad
Mursal haddii uu saaxiibkii balan ka qaaday inuu laabta u furi doono xaaskiisa hadana ma jirin wax uu ka qabtay balantii sidii ayaa uu gurigiisa u gala isaga oo aad moodo inuu reerka uu marti u yahay.
Wax hadal badan isma dhaafsadaan inuu jiifo iyo inuu computerkiisa ku mashquulsan yahay ayaa uu waqtigiisa ku dhameeyey Miskiin Yaasmiin waxba ma su’aasha balse waxa ay isu sheegtay in Mursal uusan iyada qalbi u haayin isla markaana ay jirto gabar kale oo uu jecel yahay waxay si buuxda u hubtay in iyada uusan jacleyn oo uu qof kale jecel yahay.
Qadar weli waa uu dhowrayaa inuu fursad ku helo Samiira uu banaanka ugu soo saaro dhowr jeer ayaa uu ku celceliyey inay habeen soo wada casheeyaan hadana weli uma hagaagin waxaana aad ugu soo horjeeday Samiira oo ogeyd in tani uusan aabaheed ogolaaneynin mar kasta si bay ku qancin jirtay Qadarna waxaad moodaa inuusan ka daalin inuu fursada xilli kasta uu goobo.
Falis samiirkii ayay ku jirtay mudo usbuucii xogaagii ay guriga iskula celineysay ayaa ka idlaatay dukaankii ay biilka u doonan jirtay waxba uma oolin Hooyo Batuulo iyada waajibkeeda waa ka soo baxday markii ay aragtay in Falis aysan guriga u soo cunto doonan ayay bilowday in garaankooda meel gaar ugu shubto oo ay ciyaalka ugu dhiibto waana ay dareemi kartay in ay tani ku adag tahay Falis haddana waxa ay aheyd waxa kaliya ee ay awoodi kartay ileyn wiilkeeda Yaasiin ayaa fursadii ay nolosha siisay dayacay mana jirin fursad kale ay u heli kartay iyada oo ogeyd culeyska uu aabahiis u keenay.
Falis waxaan moodaa in mudo usbuuc ah uu miisaankeeda ku dhimay ileyn nolol aysan garan meesha ay u wado ayay gashay waxayna qalbiga si xoogan ugu heysay in aysan marnaba fursada ugu furneyn reerkeeda kii ay dartii kaga soo huleeshayna waa kan in ay jirto iyo in kale aan ogeyn maalintiina u jiifa habeenkiina qayilaad iyo shiishid cabid u haayo.
Falis oo saaka quraacdii loo keenay ku dul fikireyso ayaa aragtay Kafaayo oo aheyd gabar ay guriga wada degan yihiin isla markaana maqaayo ku laheyd Xaafada ninkeeda uu lahaa garaash weyn oo xaafada ku yaalay noloshaas is garabsiga ku dhisanna ay ku korin jireen caruurtooda in cabaar ah markii ay fiirisay ayay ku tiri.
Falisey waan fahmi karaa in nolosha ay dhib badan tahay hadana u Samir ayay rabtaa waxba nafta ha mashquulin
Maxaan kalaoo sameyn karaa in aan fikiro mooyee
Waan ku fahmi karaa dhibkaaga haddii ay jiraan waxaan kuu qaban karo fadlan ha igala xishoon ii sheeg
Waad mahadsan tahay walaashey balse saaka miyaad xanuuunsan tahay maxaad maqaayadii u aadi weyday
Maqaayada walaahi ma aanan aadin mana filayo in aan dib dambe u aadi doono safar ayaa I soo galay
Safar side ah Saaxiib
Waxaa jirta gabar aan walaalo nahay oo dibada ku maqan carruurteeda ayaa halkaan joogo iyagii ayaa loo oglaaday waliba caruurteyda leynka ayay ka qeyb yihiin marka waxaa la iga rabaa in caruurihii aan Ethiopia geeyo halkaas oo laga kaxeyn doono.
Maasha allah waa arrin fiican illaahay ha idiin saqiro
Walaahi ma maleyn kartid sida aan u baqayo weligay Muqdishu meel kagama bixin ma dal kale iyo qowmiyad kale Ayaan la yaaban nahay sida aan ula qabsan karo ama aan ula noolaan karo.
Sidaa oo dhan uma cabsi badna teeda kalana Soomaali badan ayaa Addis Ababa ku nool dhabtiina waad heli doontaa cid ku saacida.
Inshah allah Walashey illaahay ha ii saqiro
Ka waran maqaayada maxaad ka damacsan tahay
Walaahi wax qorsho ah uma haayo balse in aan ka soo guuro lee u badan tahay oo aan alaabtana aan iska iibiyo ileyn aniga laf ahaanteyda waxaa dhici karta in aan dib u soo laaban oo ay leyn aan ku baxo la ii habeeyo marka ilmuhu baxaan kadib.
Ka waran haddii aan kaala wareego oo aan ku shaqeysto badalkii aan reerkiisa u cunto doonan lahaa wixii qiimo ahna waan iska bixinayaa.
Walaahi fikir fiican waana kugu wareejinaa waliba isla beri Ayaan ku geynayaa
Maasha allah waaad mahadsan tahay walaashey aniga caawa Ayaan Yaasiin u sheegayaa
Ma isagaa lacagta ka sugeysaa
Muxuu heystaa oo uu I siin karaa waa nin noloshiisa qaribay katiinkaan iyo nagahaan ii xeran Ayaan soo iibinaa kaliya waan u sheegayaa oo kaliya.
Armuu kuu diidaa
Muxuu diidi karaa ileyn waa nin aan bakeeri shah xataa ii awoodin ee waan isaga sharfayaa badalkii uu I eedeyn lahaa.
Xilli kasta diyaar Ayaan kuu ahay in aan kugu wareejiyo.
Markiiba waxaa la go’aansaday in isla galabta la tago oo Samiira maqaayada lagu soo wareejiyo sidii ayaana la yeelay oo Samiira isla waqtigii halkii nadaafad ku gashay si maalinta beri ay u furto oo aan macmiisha ugu kala habaabin.
Sidii ay fileysay Samiira ayay noqotay oo marnaba ma uusan fara gelin hamigeeda waana uu aqbalay waxay kale oo ay Samiira arrintaan u sheegtay Hooyo Batuulo wallow ay la xumeyd hadana ma jirin si ay u maanacdo maadaama noloshii loo alkumay uu wiilkeeda baabi’iyey waana ogeyd in Cali Muran aysan mar kale ka iibin Karin wiilkeeda oo hanti badan lumiyey.
Mursal caadadii xumeyd ee uu gurigiisa kula noolaa ayaa uu weli ku jiray Yaasmiin iyada oo aheyd qof iska war gaaban ma dhicin in maalin uun ay ka wareysato seygeeda waxa hayo ee ku qasbayo in gurigiisa uu sidii qof marti ah oo kale ugu noolaado.
Previous articleSaacad uu xirnaa saxafiga Khashoggi oo fududeyneysa in lagu ogaado halka uu joogo
Next articleIran is new transit point for Somali charcoal in illicit trade taxed by militants: U.N. report